Ihe mgbochi mmiri: Gini bu ndi okachapu ihe ntanetu kacha mma?
Nchịkọta weebụ ntinye ederede gụnyere ichebe data ọhụrụ na nke dị na ebe nrụọrụ weebụ na ịchekwa ya na ntanetị data search maka mfe ịnweta. Ọ bụ eziokwu na ngwá ọrụ ntanetị weebụ na-enweta nkwado na oge n'ihi na onye ntanetị weebụ ejirila rụọ ọrụ ma mee ka ọ dị mfe ịmepụta ihe niile nwere ike ịnweta ozi data weebụ. Ụfọdụ ihe nchọgharị weebụ na-eme ka ndenye ọrụ ma ọ bụ nwuo saịtị ma ọ bụ blọọgụ ha n'ụzọ dị irè ma dị irè na-enweghị ihe ọ bụla dị mkpa maka koodu. Ha na-agbanwekwa data ahụ n'ụdị dị iche iche ma mee ihe ndị chọrọ n'aka ndị ahụ. N'ebe a, anyị atụlewo ngwá ọrụ weebụ crawler magburu onwe ya iji wepu weebụsaịtị na blọọgụ.
Cyotek WebCopy bụ usoro zuru ezu na nchịkọta data nke na-ahapụ gị ka ị debe saịtị na draịvụ ike gị ka i wee nwee ike ịgụ ya n'enweghị ihe ọ bụla. njikọ Ịntanetị. Usoro a na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ akọwapụtara tupu ibudata data ha ma ọ bụ ọdịnaya na diski ike gị. Ọ na-ejikwa njikọta ihe onwunwe dịka ihe oyiyi, ibe weebụ, na ọdịnaya mpaghara nke saịtị, ma wepu ngalaba nke otu weebụsaịtị ahụ nke na-apụtaghị ihe ọ bụla na engines ọchụchọ.
HTTrack bụ usoro n'efu nke na-enye ọrụ dịgasị iche na nhọrọ ndị ruru eru maka nbudata otu saịtị na intaneti na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka..Ụfọdụ n'ime nsụgharị ndị a ma ama bụ Windows, Sun Solaris, Unix, na Linux. Ihe omume a na-enye ohere iji anya gị hụ ebe ị na-ahụ ihe karịrị otu ugboro ma mee ka usoro ntanetị weebụ dịkwuo mfe. I nwekwara ike ịnweta ihe oyiyi, faịlụ, koodu HTML, akwụkwọ ndekọ, yana ịkwụsị nbudata oge ọ bụla.
Octoparse bụ ike, ntanetị nwere ike ịnweta iji wepu ụdị data ị chọrọ site na saịtị gị. Usoro a na-eji nhọrọ abụọ ịwapụta ebe nrụọrụ weebụ gị n'ụzọ dị mma ma nwee ọtụtụ ọrụ iji nweta irite uru na. Ụzọ ya abụọ a ma ama bụ Advanced Mode na Ọkachamara Mode, nke dị mma ka onye mmemme na-eji Octoparse mee ihe n'oge ọ bụla. Ị nwere ike ibudata saịtị gị n'ime sekọnd iji iji ngwá ọrụ a. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchekwa saịtị na ụdị ọkwa dị iche iche dịka Excel, HTML, na ederede.
Nzere bụ ihe dị mfe iji rụọ ọrụ nke na-enye aka igbasa blog ma ọ bụ saịtị n'otu ntabi anya. Ọ ga-ebudata gị na saịtị ma nwee ọtụtụ nhọrọ iji nweta uru site. I nwekwara ike tinye URL wee họrọ faịlụ ndị ịchọrọ ibudata na kọmputa gị. Usoro a bụ otu n'ime ihe kacha mma n'ihi na ọ na-abịa na 15 asụsụ dị iche iche, nwere 24/7 nkwado, na-eme ka gị nchọgharị ahụmahụ magburu onwe ma pụtara ìhè.
Onye na-ekpochapu ihe bụ ihe nchịkọta a ma ama nke Chrome nke nwere njedebe nchịkọta data mana ọ na-enye aka maka ịme ọchụchọ ntanetị. Ọ na-ebupụtakwa data gị na akwụkwọ mpịakọta Google karịa kọmputa gị, na-echekwa oge dị ukwuu Source .